Nyika inotevera yekupa ruzivo nezve zvifambiso zvevoruzhinji ichave Japan | IPhone nhau
Pamusangano wegore rapfuura wekuvandudza, uko Apple yakaunza zvimwe zvezvinhu zvitsva kuti zviuye neIOS 9, Apple yakazivisa kuti iyo Mepu app yaizotanga kupa ruzivo rwekufambisa kwevanhu, kuitira kuti vashandisi vaende kune chero nzvimbo yeguta kana kunyangwe nyika, vachishandisa chete Apple Mepu kunyorera.
Asi kuwedzera kweiri sevhisi kuri kunonoka kupfuura zvinopfuura izvo munhu zvaangade, kubvira zvishoma inowanikwa mumaguta gumi nemaviri, mazhinji acho muUnited StatesZvikasadaro, isu tinofunga nezve makumi matatu emaguta eChina ane ruzivo urwu kubvira pakatangwa iOS 30.
Parizvino ruzivo pamusoro penzira dzekutakura vanhu dziripo mune mamwe maguta muAustralia, Brazil, Canada, China, England, Germany, Mexico, China neUnited States. Asi munguva pfupi Japan ichawedzerwa kune iyo runyorwa rwenyika uko urwu rudzi rweruzivo ruchave ruchizowanikwa zvakare. Kune izvi isu tichafanirwa kumirira iyo Cupertino-based kambani kuvhura iyo yegumi vhezheni yeIOS, yakarongerwa mwedzi waGunyana pamwe nekuburitswa kweiyo nyowani iPhone 7 mhando.
Sezvo isu takakwanisa kuverenga muAta Distance blog iyo yakwanisa kutora kutora kwekushanda kweruzivo rwekufambisa kwevanhu MuApple Mamepu, kambani inoronga kupa urwu ruzivo nekuvhurwa kweIOS 10. Mumufananidzo iyo blog iyi yaburitsa, tinogona kuona mitsara yezvitima inosiya kubva kuShinjuku chiteshi muTokyo pamwe nemasuo nekubuda kubva chiteshi chechitima.
Panguva ino hatizive kana nekuuya kweIOS 10 Apple ichapa sevhisi iyi mune imwe nyika kana kungo wedzera kune nyika yekubuda kwezuva. Tichafanirwa kumirira kuti tione kana Apple ichiwedzera mamwe maguta anotaura chiSpanish, kunze kweMexico City, iyo yave ichiwanikwa kwemwedzi yakati wandei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Nyika inotevera yekupa ruzivo pamusoro pekutakura kwevanhu ichave Japan